सुपरस्टार विजय थालापथीले किन हाले आफ्नै बुबा-आमासहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा ? | समाचार
सुपरस्टार विजय थालापथीले किन हाले आफ्नै बुबा-आमासहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा ?
September 21, 2021 NepstokLeaveaComment on सुपरस्टार विजय थालापथीले किन हाले आफ्नै बुबा-आमासहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा ?
एजेन्सी । तमिल फिल्म क्षेत्रका सुपरस्टार विजय थालापथीले चेन्नईको अदालतमा आफ्ना बुबा एसए चन्द्रशेखर र आमा शोभा चन्द्रशेखर सहित ११ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। विजयले बयान जारी गर्दै दायर गरिएको मुद्दामा उनले भनेका छन् कि उनी राजनीतिमा सामेल छैनन्।
गत वर्ष विजयका बुबा, फिल्म निर्माता एसए चन्द्रशेखरले राजनीतिक दल (अखिल भारतीय थालापति विजय मक्कल इयक्कम) को घोषणा गरेका थिए। उनले आफूलाई पार्टीको महासचिव, पत्नीलाई यसको कोषाध्यक्ष र आफन्त पद्मनाभनलाई पार्टीको अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए। यो पार्टी भारतको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो।
केही समय पहिले अभिनेता विजयको कल्याणकारी संस्था ‘विजय मक्कल इयक्कम’ लाई राजनीति पार्टीका रुपमा दर्ता गराउने खबर बाहिरिएको थियो। ‘अल इन्डिया थालापथी विजय मक्कल इयक्कम’ नाम रहने भनिएको त्यो पार्टी दर्ता हुने खबरलाई विजयले साँचो नभएको बताएका थिए।
त्यसपछि विजयले सार्वजनिक रुपमा स्पष्टिकरण गरेका थिए, ‘म मेरा प्रशंसक र आमजनतामा भन्न चाहन्छु कि मेरो बुबाले सुरु गरेको राजनीतिक दलसँग मेरो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै सम्बन्ध छैन।’
तर विजयका बुबा चंद्रशेखरले इंडिया टुडेसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘१९९३ मा मैले विजयको नाममा एउटा फ्यान क्लब चलाएको थिएँ र पाँच वर्षपछि त्यो कल्याणकारी संस्था बन्यो। समूहमा थुप्रै युवा थिए। हामी उनीहरुलाई जिम्मेवार युवा बनाउन चाहन्थ्यौं। पछि मैले त्यो कल्याणकारी संस्थालाई फोरम बनाइ दिएँ।’
मानिसहरुलाई सहयोग गर्न यसो गरिएको उनको दाबी छ। उनले यो पनि भनेका थिए, ‘विगत २५ वर्षदेखि यसले कुनै स्वार्थ बिना काम गरिरहेको छ। अब मैले मानिसहरुलाई अझ राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्नका लागि यसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न लागिएको हो।’ थालापथी विजयका ‘मास्टर’, ‘सरकार’, ‘थेरी’ लगायत फिल्म चर्चित छन्। हाल विजय ‘बिस्ट’ को छायांकनमा व्यस्त छन्।
बनेपा घटनामा श्रीमानको बयान : ‘छोरा र श्रीमती मा रेँ, शवलाई रातभरी अंगालेर सुतेँ’मनिषा र युवानलाई ब्लान्केटले नाक मुख थु ने र श्वास फेर्नै नदिई मा रे को आ’शं’का
जब पाँ’च गोदाम खा’द्यान्नका मालिक भोकै भए